Efa-taona izay no niarahako tamin’ny olon-tiako.
Salama tompoko! Izaho dia vehivavy manana olon-tiana
. Zandriko telo taona izy io. Efa ho herintaona sy tapany izahay no niaraka nefa mbola tsy mahafantatra ny fiarahanay ny fianakavianay roa tonta.
Nisarahan’ny sipako aho sady no-“bloquer”-ny tao anaty Facebook fa lazainy ho tsy tia azy akory.
Tsy ampy iray andro akory no nanaovany an’izay dia novainy ho “en couple” miaraka amin’ny vehivavy hafa ny tao anaty Facebook-ny. Rehefa avy eo dia nangatahany ho namana any amin’ny kaonty hafa indray aho. Mahatsiaro ho mijaly aho satria mbola tena tiako izy. Inona no tokony ataoko ?
Vehivavy 21 taona aho, manana olon-tiana.
Tsy fantatro, raha tsy volana vitsivitsy taty aorian’ny niarahanay, fa efa misy vehivavy hafa miaraka aminy talohako.
Raha tsy miverina mandritra ny 20 andro ve ny fadimbolana dia mety ho bevohoka ?
Tsy dia tena mazava tsara ny fanontanianao fa mety hanana dika anankiroa. Ny mety ho dikany voalohany dia hoe : efa tara 20 andro ny fadimbolana, mbola tsy niverina. Mety ho fambarana vohoka tokoa izany, nefa koa mety ho fikorontanan’ny tsiry mpanentana ihany koa no mahatonga ny fahataran’ny fotoana.
Nampirafy ahy foana ny vadiko nandritra ny taona maro.
Efa nitalaho taminy aho mba hanajanonany izany, fa tsy nety izy. Efa norahonako hisarahana koa izy, nefa tsy nampiova azy kely akory izany. Amin'izao, nahita lehilahy tia ahy aho ary miaraka izahay, efa roa volana izao. Manam-bady izy, fa tsy mampaninona ahy, satria mitondra tsiky amin'ny fiainako. Diso ve aho ?
Manana olon-tiana aho, izay tiako sady tsy foiko, nefa izahay miady foana.
Mahatsiaro mijaly aho miaraka aminy, nefa tsy te hisaraka aminy koa. Izy rahateo tsy mahafoy ahy. Inona no ataoko mba tsy hijaliako intsony miaraka aminy ?
Tratrako nampirafy ahy anefa izy, tamin’ny alalan’ny “message” tao anaty Facebook. Taty aorian’izay dia lasa tsy nahatsapa intsony aho, na tia ahy izy na tsia. Izaho anefa tsy mahafoy azy ary ny mamany koa tia ahy. Inona no ataoko ?
Mbola maratra be ny fonao, noho ilay fampirafesana nataony, hany ka lasa tsy matoky azy sy ny fitiavany intsony ianao. Ny mety indrindra aminareo dia ny mifampiresaka momba io fampirafesana nataony io. Asa raha nanapa-kevitra ny hisaraka tamin’ilay vehivavy izy, na tsia ; raha efa nifona taminao izy, na tsia… Ny hametrahana ny fepetra rehetra hitohizan’ny fiarahanareo mihitsy no ilàna io fifampiresahana io. Amin’izay fotoana izay koa no ahafahanao mamela heloka azy, izay fiantombohan’ny famerenenao tsikelikely ny fitokisanao aminy. Raha mbola tsy nisy izay fifampiresahana izay dia tena tokony atao.
Efa roa taona niarahana izaho sy ny sipako. Tato ho ato anefa dia lasa tsy miraharaha ahy intsony izy, ka nahatonga ahy nampirafy azy. Te hisaraka amin’ilay voalohany aho, nefa sady tsy mahafoy azy ihany. Ilay faharoa koa mangataka ny hisarahanay, satria fantany fa efa misy olona miaraka amiko. Tsy hitako izay atao.
Mila mandinika tsara ianao ny amin’izay karazana vehivavy mety aminao. Aza faly manao mamy ny atsy, fy ny eroa, fa diniho tsara ny ao anatinao. Eritrereto mihitsy hoe : vehivavy manana endrika ivelany toy ny ahoana, manana toetra toy ny ahoana, manana tanjona toy ny ahoana… no heverinao fa mahasambatra anao eo amin’ny fiainana ary mendrika ny fitiavanao. Rehefa fantarao tsara izany dia diniho indray izy roa vavy. Fantaro hoe : iza amin’izy ireo no mifandraika indrindra amin’izay tadiavinao. Izay safidiana.
Mbola mpianatra aho ary tia lehilahy anankiray ao am-pianaranay. Inona no ataoko mba hanadinoako azy ?
Marina tokoa fa tsy mora ny mamafa ao am-po sy ao an-tsaina ny olona tiana, nefa mbola mifankahita amin’ny tena isan’andro. Rehefa mazava tsara ao an-tsainao anefa ireo antony tokony hanadinoanao azy, dia efa misy dingana anankiray vitanao, manamora kokoa ny fanadinoanao azy. Angony ireo antony ireo dia afantsiho tsara ao an-tsainao. Rehefa averimberinao matetika ao an-tsainao ireo dia ho resy lahatra kokoa ianao fa mila manadino azy. Mila manana finiavana be koa anefa ianao tsy hieritreritra azy intsony. Fomban’ny tanora mantsy, ohatra, ilay mamorona nofinofy ao an-tsaina, rehefa misy lehilahy tiana. Ialao lavitra iny ary ahodino haingana ny saina. Hanampy anao amin’izany ny famenoana ny fotoana, amin’ny fanaovana zavatra betsaka : manao “cours”, mamaky boky, miditra fikambanana masina any am-piangonana, miala voly miaraka aminy namana sy ny fianakaviana…